Iyo Patriot Evlvr Inotakurika Kutinhira 3 1TB SSD Capsule Ongororo
Kuwedzera kuri kuita mukurumbira weThunderbolt 3, pamwe chete nekubuda kweNVMe SSDs mune compact M.2 fomu-chinhu, chakagonesa kirasi nyowani inotakurika yepamusoro-yekuita mwenje yekuchengetera michina. External SSDs ine Thunderbolt interface yanga iriko kwemakore mashoma ikozvino, asi, mutengo weuwandu hwekuita waivatadzisa kuwana kugamuchirwa kwakakura. Zvinhu zviri kuchinja neiyo inotakurika Thunderbolt 3 SSDs, uye wallet-inoshamwaridzika sarudzo dziri kubuda, nekuda kweiyo Phison's mareferenzi dhizaini ayo akaenda kuruzhinji ku2018 CES. Isu munguva pfupi yapfuura aongorora Rapid yeTEKQ, inotakurika Thunderbolt 3 SSD inoshandisa mutungamiriri wePison (asi, kwete iyo 3D TLC-based yakaderera-mutengo rejista dhizaini). Patriot Memory inotaridzika kunge ichave mutengesi wekutanga kuunza vhezheni yereferensi dhizaini kumusika wevatengesi nenzira ye Patriot Evlvr. Patriot achiri kushanda pane yekupedzisira kurongedza kwechigadzirwa kuti vatengese kuwanikwa panopera Q3 2018, asi, ivo vakatitumira imwe yavo 1TB pre-yekugadzira zvikamu zvekuongorora.
Iyo Patriot Evlvr ndeye 90mm x 45mm x 12mm yesirivheri-rakatsvuka rekunze SSD ine aluminium chassis. Inotamba imwechete Thunderbolt 3 interface kune ese simba uye data. Chiteshi ichi chinogoneswa neIntel JHL6340 Thunderbolt 3 Controller - ziva kuti izvi ndezve mhuri yeAlpine Ridge, uye nekudaro, inoshanda chete neThunderbolt 3 Type-C chiteshi. Kune rimwe divi reJHL6340 ndeye PCIe 3.0 x4 yekubatanidza inotungamira kune M.2 slot inokwanisa kugara M.2 2260 kana 2280 PCIe SSDs. Iko hakuna epurasitiki zvigadzirwa mune chassis. Iyo chassis zvakare inosanganisa machira ekupisa eiyo Thunderbolt inodzora pamwe neiyo M.2 SSD.
Kunyangwe iri bhodhi huru inotsigira PCIe 3.0 x4 SSD, iyo Patriot Evlvr inoshandisa PCIe 3.0 x2 NVMe SSD. Sezvo mifananidzo iri mu gallery iri pamusoro inoratidza, iyo SSD inoshandisa mutungamiriri wePison PS5008-E8. Iyo tsvimbo inosanganisira ina emwenje mapakeji (Toshiba BiCS 2 3D TLC flash), pamwe ne512MB yeDDR3L DRAM.
Iyo seti yeThunderbolt 3 SSDs yatakatarisa idiki chaizvo - iyo chete imwe unit mukirasi yayo yekugona ndeyedu Kugadziriswa kwe DIY neiyo TEKQ Rapide yakavharirwa uye iyo SanDisk Yakanyanya Pro M.2 NVMe 3D SSD.
Zviratidzo zvakasiyana-siyana zvekugadzira zviripo kuti zviongorore nekukurumidza mashandiro emidziyo yakachengetedzwa yakanamatira. Yechokwadi-yepasi kuita kwekuyedza kuyedza kazhinji kunofanirwa kuve muyedzo wakasarudzika. Isu tinopa ese maviri marudzi mune ino ongororo, tichitanga neyekugadzira mabhenji muchikamu chino. Tisati tavhara izvo, isu tinotarisa nekukurumidza pane yedu testbed setup uye nzira dzekuyedza.
Tested Setup uye Testing Methodology
Kuongororwa kwezvikamu zveDAS pa Windows zvinoitwa neyakaedzwa testbed yakatsanangurwa patafura pazasi. Kune zvishandiso zvine Thunderbolt 3 (Type-C interface) kubatana (senge Patriot Evlvr TB3 SSD 1TB yatiri kufunga nezvayo nhasi), tinoshandisa USB 3.1 Type-C chiteshi chakagoneswa neIntel Alpine Ridge controller. Inobatana neZ170 PCH kuburikidza nePCIe 3.0 x4 link ..
ndangariro G.Skill Ripjaws 4 F4-2133C15-8GRR
Add-on On Card hapana
Ndinokurumbidza Cooler Master, GIGABYTE, G.Skill uye Intel yezvivako zvekuvaka
Zvose zvakazara zvekufunga kwekusarudza kusarudzwa pamusoro apa zvinogona kuwanikwa pano. Rondedzero yezvikamu zveDAS zvinoshandiswa pakuenzanisa zvinopihwa pazasi
Patriot Evlvr TB3 SSD 1TB (yakamisikidzwa muNTFS)
DIY TEKQ Rapide - SanDisk Yakanyanya Pro TB3 SSD 1TB
LaCie Rugged Kutinhira 500GB
Synthetic Benchmarks - ATTO uye Crystal DiskMark
Patriot anoti kuverenga nekunyora kumhanya kwe1.5 GBps uye 1 GBps zvakateerana, uye izvi zvinotsigirwa nezviratidzo zveATTO zvakapihwa pazasi. Nehurombo, idzi nzira dzekuwana hadzina kujairika mune chaiwo-ehupenyu zviitiko.
Gadzira Performance Mabhenji - ATTO
Patriot Evlvr TB3 SSD 1TBDIY TEKQ Rapide - SanDisk Yakanyanya Pro TB3 SSD 1TBLaCie Rugged Thunderbolt 500GBTEKQ Rapide TB3 SSD 240GB (exFAT)
CrystalDiskMark, kunyangwe iri bhenji rekukanini, inopa fungidziro iri nani yehuwandu hwekuita pamwe neseti yakasarudzwa yenhamba. Sezviri pachena kubva kuiyo skrini iripazasi, mashandiro acho anogona kunyura kusvika pasi kusvika makumi matatu nesere MBps yekuverenga zvisina tsarukano pakadzika kwetambo yakadzika. Nekudaro, iko kuita kwepamusoro kwakaringana nezvatakaona mubenchmark yeATTO.
Mabhenji - robocopy uye PCMark 8 Yekuchengetedza Bench
Yedu nzira yekuyedza yezvikamu zveDAS inotorawo kufunga nezve yakajairwa yekushandisa-kesi yezvigadzirwa zvakadaro. Mamiriro akajairika ekushandisa kuendesa akawanda mafoto uye mavhidhiyo kuenda uye kubva kuchikamu. Mamiriro madiki ekushandisa ari kuendesa mafaera akananga kubva kuDAS muchirongwa chekugadzirisa multimedia senge Adobe Photoshop.
Kuti tibate yekutanga yekushandisa-kesi, isu takagadzira matatu bvunzo mafolda ane anotevera maitiro:
Mifananidzo: 15.6 GB gadziriro ye 4320 photos (RAW pamwe neJPEGs) mu61 sub-folders
Vhidhiyo: 16.1 GB kukosha ye244 mavhidhiyo (MP4 pamwe neMoVs) mu6 sub-folders
BR: 10.7 GB Blu-ray folda yakarongeka yeAIDT Benchmark Blu-ray
Mifananidzo ReadPhotos Nyora Mavhidhiyo VerengaVhidhiyo Nyora BhalaBlu-ray Folder ReadBlu-ray Folder AndikaExpand All
Yechipiri yekushandisa-kesi, isu tinotora mukana wePc Maka 8 yekuchengetera bhenji. Basa rekuchengetedza rinosanganisira mitambo pamwe nekushambadzira kwemultimedia. Iyo yekuraira mutsara vhezheni inotibvumidza isu kuti titore-tora matanho ekuchengetedza kumhanya pane yakanangwa drive. Takasarudza zvinotevera zvinotevera.
Adobe Photoshop (Chiedza)
Kazhinji, PC Mako 8 inoshuma nguva yekupedzisa trace, asi iyo yakajeka dhigi ripoti ine kuverenga uye kunyora bandwidth manhamba ayo isu atinopa mune edu ekuita magirafu. Ziva kuti iyo bandwidth nhamba yakataurwa mumhedzisiro haisanganisi isina basa nguva yekumanikidza. Mhedzisiro inogona kuoneka yakaderera, asi icho chikamu cheiyo basa rekuremedza hunhu. Ziva kuti iyo imwechete testbed iri kushandiswa kune ese maDAS mayuniti. Naizvozvo, kuenzanisa nhamba dzega dzega dzekutarisisa kunofanirwa kuve kunogoneka pamatanho akasiyana eDAS.
Adobe Photoshop Light ReadAdobe Photoshop Heavy ReadAdobe Mushure mekunge Verenga ReadAdobe Illustrator ReadAdobe Photoshop Chiedza WriteAdobe Photoshop Heavy WriteAdobe Mushure mekutevedzana WritAdobe Mufananidzo weExtre Expand All
Mhedzisiro kubva kumatanho ebenchmark anoratidza kuti Patriot Evlvr haigone kuenderana neiyo TEKQ Rapide, kana, yedu DIY dhizaina neiyo TEKQ yakavharirwa uye SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe 3D SSD. Izvi zvine musoro, zvichipiwa kuti yemukati SSD muEvlvr ine PCIe 3.0 x2 interface, ichienzaniswa nePCIe 3.0 x4 chinongedzo mumaSSD anokwanisa kubuda nenhamba dziri nani.
Asi chimwe chinonakidza chikamu chemhando idzi dzeyuniti kuita kusagadzikana. Zviitiko zvinogona kukanganisa izvi zvinosanganisira kupisa kwemafuta uye firmware mavharesi pamitengo yekuwana kudzivirira kupisa kana zvimwe zviitiko zvakafanana. Ichi chinhu chakakosha, sechinhu chekupedzisira icho vashandisi chavanoda kuona pavanoteedzera, toti, 100 GB yedata kune iyo flash drive, ndiyo yekuchinjisa mwero kuenda kune USB 2.0 kumhanya. Kuti tione kana dhiraivha iri pasi peyedzo inotambura nedambudziko iri, takashandisa robocopy DAS bhenchmark suite kuti tinyore flash drive kuverenga nekunyora mitengo yekuchinjisa nepo robocopy ichiitika kumashure. Zvekutyaira kwakatsigirwa, isu zvakare takanyora tembiricha yemukati yedrive panguva yekuita. Iwo mairafu pazasi anoratidza kumhanya kunoonekwa panguva yedu chaiyo-pasirese DAS suite kugadzirisa. Iwo matatu ekutanga seti yekunyora uye kuverenga zvinoenderana nemifananidzo suite. Gap diki (yekuchinjisa mavhidhiyo suite kubva kune yekutanga dhiraivha kuenda kune RAM drive) inoteverwa nematatu seti einotevera data seti. Imwe diki RAM-dhiraivha yekumisikidza gap inoteverwa nemaseti matatu eBlu-ray folda.
Chinhu chakakosha kucherechedza apa ndechekuti yega yega yekutanga matatu ebhuruu uye girini nzvimbo inoenderana ne15.6 GB yekunyora uye kuverenga zvichiteerana. Kubvunda, kana kuripo, kunoonekwa mukati mekugadziriswa kwemapikicha suite pachayo. Pano, isu tinoona avhareji kunyora kumhanya kwechipiri kupasa kwemifananidzo suite ichiderera zvishoma pane yekutanga kupfuura. Izvi zvinonongedza kupera kweiyo SLC cache, asi, mhedzisiro yacho haina kusimba senge yedu yekugadziriswa kweiyo DIY nekuda kweiyo yakasarudzika yakaderera interface chinongedzo kumhanya.
Kuwirirana Kushanda pamwe neHumisi Zviratidzo
Iwo tembiricha zvakare ari padivi repamusoro achienzaniswa neyedu DIY yekugadziriswa. Iyo Evlvr yemukati SSD yakazosvika 67C nenguva yatakasvika kumagumo kweyedu suite suite (ichienzaniswa ne57C yeedu DIY dhizaini). Izvo zvinokwanisika kuti iyo yekupedzisira firmware kubva Phison inogona kusarudza kumhanyisa iyo SSD inotonhorera zvishoma nekuzvipira zvishoma kuita. Chero zvazvingaitika, iyo yazvino gadziriso yakatemwa naPatriot inomhanya zvishoma tovy kana ichienzaniswa neyedu DIY dhizaini uye iyo 240GB vhezheni yeTEKQ Rapide.
Zvinhu zvakasiyana-siyana Nezvokugumisa Mashoko
Iyo yeThunderbolt 3 maratidziro anoratidza kuti doko rekutambira rinofanira kukwanisa kupa kusvika ku15W yezvigadzirwa zvine simba-bhazi zvakabatana nazvo. Sezvo iyo Patriot Evlvr chishandiso chine simba-bhazi, chinopihwa kuti simba rayo rekushandisa risingakwanise kudarika 15W kuti ive Certified Thunderbolt 3 chishandiso. Izvo zvichiri kukosha kutora yakanaka-yakatariswa kutarisa kune simba rekushandisa chimiro. Uchishandisa iyo Inogadziriswa USBC-TKEY, simba rebhazi rekushandisa maSSD ese ari maviri rakateedzerwa nepo basa reCrystalDiskMark rakagadziriswa. Iwo ekuremerwa ebasa akaiswa pamwe nenguva yenguva ye30s.
Shandisa Simba Simba Kuteedzera - CrystalDiskMark Workloads
Patriot Evlvr TB3 SSD 1TBDIY TEKQ Rapide - SanDisk Yakanyanya Pro TB3 SSD 1TB
Iko simba rekushandisa simba rinosara pazasi pe6W, asi, avhareji emagetsi emabhazi anodhira pamusoro pemabasa ese anogara akakwira kupfuura mamwe mayuniti ari kuenzaniswa.
Tsigiro yeTRIM yakakosha kuve nechokwadi chekuti mashandiro ehutano anochengetwa kunyangwe mushure mekunge SSD yave pasi pekushandisa kwenguva refu. Sezvo iyo Thunderbolt interface iri pachena kune ese anoshanda zvinangwa, uye iyo inomiririra OS inoona PCIe NVMe SSD, inouya pasi kune yemukati SSD inotsigira TRIM. Isu takakwanisa kubudirira kumisikidza TRIM muPatriot Evlvr.
Chekupedzisira chinoda kugadziriswa mutengo - Patriot yakazivisa kuti iyo 1TB musiyano weEvlvr yaizotengesa ku $ 490. Pane imwe-GB hwaro, izvi zvinoshandura kuEvlvr iri iyo inodhura kwazvo Thunderbolt 3 SSD yatakaedza. Isu tinotenda kuti musika wakanangwa weThunderbolt 3 SSDs unogona kuganhurwa kuita maviri - imwe iri yevanogadzira zvemukati vagadziri misika uko nguva iri mari, uye imwe yacho iri yepakati mutengi iyo inongoda inomhanyisa inotakurika drive uye inongoverengwa kubhadhara a shoma shoma pamusoro pe USB-based flash drive seSamsung Inotakurika SSD T5 kana SanDisk Yakanyanya Inotakurika SSD. Iyo yekutanga inoda kuita kwakanyanya, uye iri kuda kubhadhara mutengo wepamberi weiyo - Midziyo senge iyo Sonnet Fusion, LaCie Bolt3, TEKQ Kurumidza, uye yedu DIY dhizaini ine PCIe 3.0 x4 NVMe SSD (SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe 3D SSD ine iyo TEKQ Rapide yakavharwa) tarisa iwo musika. Iyo Patriot Evlvr ndeimwe yekutanga inotakurika Thunderbolt 3 SSDs kunongedza chikamu chekupedzisira. Izvo zvakati, chimwe chezvinhu zvinogadzira michina senge Patriot Evlvr (uye imwe yakachipa mutengo Thunderbolt 3 SSDs iyo inoshandisa iyo Alpine Ridge controller) chakasimba kutengesa ndiko kusapindirana kwavo neiyo generic USB Type-C chiteshi. Aya maSSD anoshanda chete neThunderbolt 3 ports, uye nepo chikamu chekare chemusika chichigona kunzwisisa zviri nyore icho, chikamu chechipiri chinogona kuwedzera mutoro webasa revatengi.
Flash mitengo iri padanho rekudzikira, uye zvinokwanisika kuti 1TB Evlvr inogona kuvhura nemutengo wakaderera pane wakarongwa $ 490. Kunyangwe pamutengo iwoyo, zvishandiso senge Patriot Evlvr zvine chokwadi chekufadza vatengi vanoziva, uye izvo zvinosungirwa kubatsira iyo Thunderbolt 3 ecosystem.
TEKQ Rapide Thunderbolt 3 Kunze SSD Ongororo
Shanduro yeSBC-NVME inogona kuvharidzirwa-Pashoma NVMe SSD Inoplosure Capsule Review
Sabrent Rocket Nano Rugged IP67 Inotakurika SSD Ongororo: NVMe mune M.2 2242 Yakakomberedzwa
SanDisk Yakanyanya PRO uye Yakakosha X6 4TB Inotakurika SSDs Ongororo: Kupesana Kwakakwirira-Kugona Kwekuchengetedza Sarudzo.
4 Nzira dzekutarisa Kana PC Yako Ine SATA Kana NVMe SSD Mune Windows 10
Western Dhijitari Inofumura USB 3.2 Gen 2 × 2 SanDisk Yakanyanya PRO Inotakurika SSD v2
Filed Under: Dhisiki dhisiki dhiraivhu